दायित्व कानून | Law & More BV
दायित्व कानून » क्षतिको लागि दावी
आधारभूत सिद्धान्त डच क्षतिपूर्ति कानूनमा लागू हुन्छ: सबैले आफ्नै क्षति भोग्दछन्। केही केसहरूमा, केवल कोही पनि जिम्मेवार हुँदैन। उदाहरणका लागि असिनाको परिणामको रूपमा हुने क्षतिको सोच्नुहोस्। के तपाईको क्षति कसैको कारणले भएको हो? त्यो अवस्थामा, सम्भव भए क्षतिपूर्ति गर्न सम्भव छ यदि त्यहाँ व्यक्ति जिम्मेवार होल्ड गर्ने आधार छ।
के तपाईं हानिहरूको लागि दावीको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ?
क्षतिको लागि दावी
आधारभूत सिद्धान्त डच क्षतिपूर्ति कानूनमा लागू हुन्छ: सबैजना आ-आफ्नै क्षति बोक्दछन्। केही केसहरूमा, केवल कोही पनि जिम्मेवार हुँदैन। उदाहरणका लागि असिनाको परिणामको रूपमा हुने क्षतिको सोच्नुहोस्। के तपाईको क्षति कसैको कारणले भएको हो? त्यो अवस्थामा, सम्भव भए क्षतिपूर्ति गर्न सम्भव छ यदि त्यहाँ व्यक्ति जिम्मेवार होल्ड गर्ने आधार छ। डच कानूनमा दुई सिद्धान्तहरू छुट्याउन सकिन्छ: अनुबंध र कानूनी दायित्व।
> ठेक्का लाइबेलिट
> कानूनी दायित्व
> क्षतिको प्रकारहरू
> क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति वास्तवमा भोग्नु पर्‍यो
> क्षति बिमा बीमा
> वर्ग कार्य
के दलहरू सम्झौतामा प्रवेश गर्छन्? त्यसो भए यो उद्देश्य मात्र होईन, तर एउटा बाध्यता पनि हो कि यसमा भएका सम्झौताहरू दुबै पक्षले पूरा गर्नुपर्दछ। यदि एक पार्टी सम्झौता अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैन, त्यहाँ छ कमी। उदाहरणका लागि, अवस्थालाई विचार गर्नुहोस् जहाँ आपूर्तिकर्ताले माल डेलिभर गर्दैन, तिनीहरूलाई ढिलो वा खराब अवस्थामा डेलिभर गर्दछ।
यद्यपि, केवल एक अभावले तपाईंलाई अझै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अधिकार दिदैन। यो पनि आवश्यक छ उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व डच सिविल कोड को धारा ::6। मा नियमित छ। यो शर्त गर्दछ कि एक गल्ती अर्को पक्षलाई श्रेय दिन मिल्दैन यदि यो उसको गल्तिले गर्दा होईन, न त यो कानूनको खाताको लागि हो, कानुनी कार्य वा प्रचलित दृश्यहरू। यो बल majeure को मामलाहरूमा पनि लागू हुन्छ।
त्यहाँ एक कमी छ र यो पनि अक्षम्य हो? त्यो अवस्थामा, परिणामस्वरूप भएको क्षति अन्य पक्षबाट प्रत्यक्ष रूपमा दावी गर्न सकिँदैन। सामान्यतया, पूर्वनिर्धारित नोटिस पहिलो पठाइएको हुनु पर्दछ अर्को पक्षलाई अझैसम्म र एक उचित अवधि भित्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने अवसर दिन को लागी। यदि अर्को पक्ष अझै पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भयो भने, यसले पूर्वनिर्धारित हुनेछ र क्षतिपूर्ति पनि दावी गर्न सकिन्छ।
Law & More यो तपाइँको लागि पनि गर्न सक्छ
के कसैले आफ्नो नियुक्ति राख्दैन? हामी तपाईको तर्फबाट लिखित अनुस्मारकहरू पठाउन सक्छौं र मुद्दा लगाउन सक्छौं
गोद लिने सम्झौता
एउटा सम्झौताको चित्रण गर्न ठूलो काम गर्छ। त्यसकारण मद्दत दर्ता गर्नुहोस्
के तपाइँ रोजगार सम्झौता बनाउन सहयोग चाहानुहुन्छ? भित्र बोलाउनु Law & More
त्यहाँ धेरै अवस्थाहरू छन् जहाँ देयता कानून को एक भूमिका खेल्छ
थप रूपमा, सम्झौताको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर, अर्को पक्षको दायित्व लिन सकिदैन। जे भए पनि नेदरल्याण्ड्सका पार्टीहरूसँग सम्झौताको ठूलो स्वतन्त्रता छ। यसको मतलव अनुबन्धित पार्टीहरू केहि निश्चित अपकमिंग उत्तरदायित्व बहिष्कार गर्न स्वतन्त्र छन्। यो सामान्यतया सम्झौतामा नै गरिन्छ वा सामान्य नियम र सर्तहरूमा यसलाई एकको माध्यमबाट लागू हुने घोषित गरिन्छ बहिष्करण खंड। यस्तै उपधारा, तथापि, पार्टीले उत्तरदायी हुनको लागि बिन्ती गर्नु अघि निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ। जब यस्तो धारा सम्झौता सम्बन्धमा उपस्थित छ र सर्तहरू पूरा गर्दछ, सुरूवात बिन्दु लागू हुन्छ।
नागरिक दायित्व को एक सबै भन्दा प्रसिद्ध र साधारण रूप को एक हो अत्यावश्यक छ। यो एक कानूनी वा कसैलाई द्वारा बेवास्ता गर्नु समावेश छ कि गैर कानूनी रूपमा अर्को लाई नोक्सान गर्दछ। उदाहरण को लागी, विचार गर्नुहोस् कि तपाईको आगन्तुकले गल्तिले तपाईको बहुमूल्य फूलदान मा ढकढक्याउन सक्छ वा तपाईको महँगो फोटो क्यामेरा खसाल्न सक्छ। त्यो अवस्थामा, डच नागरिक संहिताको सेक्शन:: १6२ ले यस्तो कार्य वा चुकौतीको शिकार हुने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको हकदार बनाएको छ यदि केहि शर्तहरू पूरा भएमा।
उदाहरण को लागी, अरू कसैको आचरण वा कार्यलाई सर्वप्रथम मान्नु पर्छ गैरकानूनी। यो मामला हो यदि ऐनले कानुनी कर्तव्य वा सामाजिक शालीनता, वा अलिखित मानदण्डको उल्लंघन गरेकोमा केही निश्चित अधिकार वा कार्यको उल्ल .्घन समावेश गर्दछ। यसबाहेक, कार्य हुनुपर्दछ लाई जिम्मेवार 'अपराधी' यो सम्भव छ यदि यो उसको गल्तीको कारणले हो वा कुनै कारणले ऊ कानून द्वारा वा ट्राफिकमा जिम्मेवार छ। जवाफदेहीताको सन्दर्भमा आशय आवश्यक छैन। धेरै हल्का debtण पर्याप्त हुन सक्छ।
यद्यपि मापदण्डको एट्रिब्युटेबल उल्ल्घनले परिणाम सधैं क्षति भोग्ने जो कोहीलाई पनि उत्तरदायित्व दिदैन। सबै पछि, दायित्व अझै पनि द्वारा सीमित गर्न सकिन्छ सापेक्षताको आवश्यकता। यो आवश्यकताले भन्छ कि यदि कुनै उल्लंघन गरिएको मापदण्डले पीडितले भोगी क्षति रोक्नको लागि सेवा प्रदान गरेन भने क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्यता छैन। त्यसकारण यो महत्वपूर्ण छ कि 'मानक' को उल्लंघनको कारणले 'अपराधीले' पीडितको बिरूद्ध गलत व्यवहार गरे।
यदि संविदात्मक वा नागरिक दायित्व को आवश्यकताहरु पूरा भए, क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिन्छ। नेदरल्याण्ड्समा क्षतिपूर्तिको लागि योग्य क्षति पछि समावेश गर्दछ आर्थिक घाटा र अन्य घाटा। जहाँ वित्तीय घाटाले घाटा वा नाफालाई नोक्सानको चिन्ता गर्दछ, अन्य घाटाले अमूर्त कष्टको चिन्ता गर्दछ। सिद्धान्तमा, सम्पत्ति क्षति जहिले पनि र पूर्ण क्षतिपूर्तिको लागि योग्य हुन्छ, अन्य नोक्सान मात्र इन्फोफर रूपमा कानूनले यति धेरै शब्दहरूमा प्रदान गर्दछ।
क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति वास्तवमा भोग्नु पर्‍यो
यदि यो क्षतिपूर्ति गर्न आउँछ भने, को आधारभूत सिद्धान्त क्षति को पूर्ण क्षतिपूर्ति वास्तवमा भोग्नु परेको छ लागू हुन्छ।
यस सिद्धान्तको अर्थ हो कि क्षति निम्त्याउने घटनाको घाइते पार्टीलाई उसको पूर्ण क्षति भन्दा बढी फिर्ता दिईने छैन। डच नागरिक संहिताको धारा:: १०० ले भन्छ कि यदि उही घटनाले पीडितलाई नोक्सान पुर्‍याउँदछ, तर केहि उपज पनि दिन्छ लाभ, क्षतिपूर्ति गर्न क्षति निर्धारण गर्दा यो लाभ लिनु पर्छ, जबकि यो उचित छ। एउटा लाभलाई क्षति निम्त्याउने घटनाको परिणाम स्वरूप पीडितको (सम्पत्ति) स्थितिमा सुधारको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, क्षति जहिले पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति हुनेछैन। पीडित आफैलाई सहयोगी व्यवहार गर्ने वा पीडितको जोखिमको क्षेत्रको अवस्थाले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसपछि सोध्नु पर्ने प्रश्न निम्न छ: पीडितले क्षतिको घटना वा सीमाको सन्दर्भमा उसले गरेको भन्दा फरक व्यवहार गर्नु पर्छ कि? केहि केसहरूमा पीडितले क्षति सीमित गर्न बाध्य हुन सक्छ। यसमा आगलागी हुने दुर्घटना हुने घटना जस्तै आगलागी हुने अग्नि उपकरणको उपस्थिति समावेश छ। के त्यहाँ पीडितको कुनै दोष छ? त्यो अवस्थामा, आफ्नै अपराधी व्यवहार सिद्धान्तमा क्षतिको कारण हुने व्यक्तिको क्षतिपूर्ति दायित्वमा कमी आएको हुन्छ र क्षतिको कारण हुने व्यक्ति र पीडित बीचमा विभाजित हुनुपर्दछ। अर्को शब्दहरुमा: क्षतिको एक (ठूलो) हिस्सा पीडितको आफ्नै खर्चमा रहन्छ। जबसम्म पीडित यसको लागि बीमा हुँदैन।
क्षति बिमा बीमा
माथिको दृश्यमा, यो पीडितको रूपमा वा क्षतिको कारणको रूपमा क्षतिको साथ छोडियो हुन बीमा लिन बुद्धिमानी हुन सक्छ। जे भए पनि क्षति र दावी यो गाह्रो शिक्षा हो। थप रूपमा, आजकल तपाईं सजिलै बीमा कम्पनीहरूसँग विभिन्न बीमा नीतिहरू लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै दायित्व बीमा, घर वा कार बीमा।
के तपाईं क्षतिको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाईं बिमा तपाईंको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन चाहनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईले आफ्नो बीमा गर्नेलाई आफै क्षतिको रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ, सामान्यतया एक महिना भित्र। यसका लागि धेरै प्रमाणहरू जम्मा गर्न सल्लाह दिइन्छ। कुन प्रमाण तपाईंलाई चाहिएको छ क्षतिको प्रकार र तपाईंले आफ्नो बीमा कम्पनीसँग गर्नुभएको सम्झौताहरूमा निर्भर गर्दछ। तपाईंको रिपोर्ट पछि, बीमाकर्ताले संकेत गर्दछ कि कुन क्षतिलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि क्षति तपाइँको बीमा द्वारा क्षतिपूर्ति गरिएको छ भने, तपाई अब यो क्षतिको दाबी गर्न सक्नुहुन्न क्षति निम्त्याउने व्यक्तिबाट। यो क्षतिको सन्दर्भमा फरक छ जुन तपाईंको बीमाकर्ताले ढाक्दैन। तपाईंको बीमाकर्ताबाट भएको क्षति दाबीको नतिजाको रूपमा प्रीमियम वृद्धि पनि क्षतिको कारण हुने व्यक्तिको क्षतिपूर्तिको लागि योग्य छ।
केहि परिस्थितिहरूमा वर्ग कार्य सम्भावित व्यक्तिगत प्रक्रियाको लागि आकर्षक विकल्प हुन सक्छ। यो विशेष गरी फैलिएको क्षतिको अवस्थामा हुनेछ: पीडितहरूले भोगेका क्षतिको कुल मात्रा ठूलो छ, तर पीडितको प्रति हुने क्षति अपेक्षाकृत कम छ। त्यो अवस्थामा, सम्भावित क्षतिपूर्ति प्राय: प्रक्रियाहरूको लागत, समय लगानी र पीडितलाई गुमाउन सक्ने जोखिमभन्दा बढी हुनेछैन। थप रूपमा, त्यस्ता क्षतिको लागि जिम्मेवारहरू प्रायः ठूला संस्था हुन् जो कानूनी प्रणालीसँग परिचित छन् र मुद्दा दायर गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोतहरू छन्।
जनवरी १, २०२० देखि सामूहिक कार्यमा सामूहिक दावी बस्ती कानून लागू भएको छ। यसले चोटपटक पक्षहरूलाई सम्भव बनाएको छ, जसको क्षति समान घटना वा समान घटनाहरूले गर्दा भएको हो र जसको लागि केवल एक वा सीमित संख्याका (कानूनी) व्यक्तिहरू जिम्मेवार छन्, ब्याज समूह मार्फत क्षतिपूर्तिको लागि सामूहिक दावी स्थापना गर्न। डच नागरिक संहिताको सेक्शन:: 1०2020 ए अन्तर्गत वर्ग कार्यहरूको लागि अब एउटा प्रणाली छ, चाहे उनीहरूले नगद तिर्ने काम गर्छन् वा गर्दैनन्।
At Law & More हामी बुझ्दछौं कि कुनै पनि क्षति को लागी तपाइँको दूरगामी परिणाम हुन सक्छ। के तपाइँ क्षतिको सामना गरीरहनु भएको छ र तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी वा कसरी तपाइँले यो क्षति दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाइँ क्षतिको लागि दावीसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाइँ प्रक्रियामा कानूनी सहायता चाहानुहुन्छ? के हामी जान्न उत्सुक छौं कि हामी तपाईंको लागि अरू के गर्न सक्दछौं? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। हाम्रो वकिलहरू क्षति दाबीको क्षेत्रका विज्ञहरू हुन् र व्यक्तिगत र लक्षित दृष्टिकोण र सल्लाह मार्फत तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छन्!